Continuous Learning Plan – New Chelsea Elementary School
By Jen RudolphOn March 29, 2020
Hello New Chelsea Families. It is your Principal, Ms. Salinas again, calling to let you know about when and how your students will receive their Ipads and ChromeBooks.
On Tuesday or Wednesday (see below), families will come to the designated circle drive, based on the first letter of their last name. The day and time slot is designated by the grade level of their youngest child attending school. At that time, they may pick up technology for all school age children at once. Both iPads and Chromebooks will be available at either circle drive.
Tuesday, March 31- 8:30-10:00 Kindergarten (A-L front; M-Z back circle dr)
Tuesday, March 31- 11:00-12:30 1st Grade (A-L front; M-Z back circle dr)
Tuesday, March 31- 1:30-3:00 2nd Grade (A-L front; M-Z back circle dr)
Wednesday, April 1- 8:30-10:00. 3rd Grade (A-L front; M-Z back circle dr)
Wednesday, April 1-11:00-12:30. 4th Grade (A-L front; M-Z back circle dr)
Wednesday, April 1- 1:30-3:00. 5th Grade (A-L front; M-Z back circle dr)
Wednesday, April 1 5:30-6:30. Any grade (A-L front; M-Z back circle dr)
What will the check-out process consist of for technology?
● Technology check out forms
● Write down student’s first and last name; indicatingaChromebook or iPad was checked out; Chromebook or iPad number
● Parent signature
If you have questions, please email me at canise.salinas@kckps.org
Hola familias de New Chelsea. Es su directora, la Sra. Salinas nuevamente, llamando para informarle sobre cómo sus estudiantes recibirán sus Ipads y ChromeBooks.
El Martes o Miercoles, Las familias acudiránala unidad de círculo designada, según la primera letra de su apellido. El espacio de día y hora está designado por el nivel de grado de su hijo menor que asisteala escuela. En ese momento, pueden recoger tecnología para todos los niños en edad escolarala vez. Ambos iPads y Chromebooks estarán disponibles en cualquier unidad circular.
Martes, 31 de marzo: 8: 30-10: 00 Kindergarten (A-L frente; M-Z círculo trasero dr)
Martes, 31 de marzo – 11: 00-12: 30 1er Grado (A-L frente; M-Z círculo trasero dr)
Martes 31 de marzo: 1: 30-3: 00 2do grado (A-L frente; M-Z círculo trasero dr)
Miércoles, 1 de abril: 8: 30-10: 00. 3er Grado (frente A-L; círculo trasero M-Z dr)
Miércoles, 1-11 de abril: 00-12: 30. 4to Grado (frente A-L; círculo trasero M-Z dr)
Miércoles, 1 de abril: 1: 30-3: 00. 5to Grado (frente A-L; círculo trasero M-Z dr)
Miércoles 1 de abril 5: 30-6: 30. Cualquier grado (frente A-L; círculo trasero M-Z dr)
¿En qué consistirá el proceso de salida para la tecnología?● Formularios de verificación de tecnología● Escriba el nombre y apellido del alumno; indicando que un Chromebook o iPad fue desprotegido; Número de Chromebook o iPad● Firma del padre Si tiene preguntas, envíeme un correo electrónicoacanise.salinas@kckps.org¡Te veo pronto! Burmese:မင်္ဂလာပါနယူးချယ်လ်ဆီးမိသားစုများ။ ၎င်းသည်သင်၏ကျောင်းအုပ် Ms Salinas ဖြစ်သည်၊ သင်၏ကျောင်းသားများသည် Ipads နှင့် ChromeBooks များမည်သို့မည်ပုံလက်ခံရရှိမည်ကိုသင့်အားအသိပေးရန်အကြောင်းပြန်သည်။Onအင်္ဂါနေ့၊ မတ်လ ၃၁ မှ ၈း၃၀-၁၀: 00 သူငယ်တန်း (A-L ရှေ့၊ M-Z နောက်ဘက်စက်ဝိုင်းဒေါက်တာ)အင်္ဂါနေ့၊ မတ်လ ၃၁ ရက်မှ ၁၁း၀၀ ရက်နေ့အထိပထမအဆင့် (A-L ရှေ့၊ M-Z နောက်ကျောစက်ဝိုင်းဒေါက်တာ)အင်္ဂါနေ့၊ မတ်လ ၃၁ မှ ၁း၃၀-၃း၀၀ ဒုတိယတန်း (A-L ရှေ့၊ M-Z နောက်ဘက်စက်ဝိုင်းဒေါက်တာ) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ Aprilပြီ ၁-၈ ရက် – ၃၀-၁၀း၀၀ ။ တတိယတန်း (A-L ရှေ့၊ M-Z နောက်ကျောစက်ဝိုင်းဒေါက်တာ)ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, Aprilပြီ 1-11: 00-12: 30 ။ 4th grade (A-L ရှေ့၊ M-Z နောက်ကျောစက်ဝိုင်းဒေါက်တာ)ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ Aprilပြီ ၁-၁၀ ရက်။ ၅ တန်း (A-L ရှေ့၊ M-Z နောက်ကျောစက်ဝိုင်းဒေါက်တာ)ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ Aprilပြီ ၁ ၅: ၃၀-၆: ၃၀ ။ မည်သည့်တန်းမဆို (ရှေ့တန်း A-L; M-Z နောက်ကျောစက်ဝိုင်းဒေါက်တာ) မိသားစုများသည်၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးနာမည်၏ပထမစာလုံးကိုအခြေခံပြီးသတ်မှတ်ထားသောစက်ဝိုင်းမောင်းသို့ရောက်မည်။ နေ့ရက်နှင့်အချိန်ကိုကျောင်းတက်နေသည့်အငယ်ဆုံးကလေး၏အတန်းအဆင့်ဖြင့်သတ်မှတ်သည်။ ထိုအချိန်တွင်သူတို့သည်ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများအတွက်နည်းပညာကိုတစ်ပြိုင်တည်းကောက်ယူနိုင်သည်။ iPads နှင့် Chromebook နှစ်မျိုးလုံးကိုစက်ဝိုင်းတွဲနှစ်ခုလုံးတွင်ရနိုင်သည်။
နည်းပညာအတွက်ဘာတွေထွက်ခွာမှာလဲ။ ●နည်းပညာပုံစံများကိုစစ်ဆေး ●ကျောင်းသား၏ပထမနှင့်နောက်ဆုံးအမည်ရေးပါ။ Chromebook (သို့) အိုင်ပက်ဒ်ကိုစစ်ဆေးသည်။ Chromebook (သို့) iPadနံပါတ် ●မိဘလက်မှတ်
သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ canise.salinas@kckps.org သို့အီးမေးလ်ပို့ပါ
PrevAmerican Education Week- Substitues